(၂၀၂၀)တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှု သုညသို့ချဉ်းကပ်ရန်ခန့်မှန်းဟု ကိုဗစ်ကုစားရေးကော်မတီ၏ လေ့လာဆန်းစစ်ရေးအစီရင်ခံစာ ဆို – Zartiman
ကိုဗစ်-၁၉ကုစားရေး ကော်မတီ၏ လေ့လာဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံစာက Covid-19 ကာလစီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်” ဟု DaNa Facility မှ Senior Technical Advisor Peter Brimble က ပြောကြားသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် Covid-19 ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီး မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် များလည်း ပါဝင်ကာ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း MSME လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန် အရေးကြီးကြောင်းကို အလေးပေးဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
Covid-19 ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သုညသို့ချဉ်းကပ်ရန် ခန့်မှန်းထားကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။Covid-19 အစီရင်ခံစာသည် DaNa Facility? International Trade Centre နှင့် UNCDF တို့ပူးပေါင်း၍ အစိုးရ၏ Covid-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများကို ကုစားရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည့် အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
ယင်း Covid-19 ကာလ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် လေကြောင်းလိုင်းများသည် ထိခိုက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးအထူးပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း များသည် ဒုတိယထိခိုက်မှုအများဆုံး လုပ်ငန်းများဖြစ်ကာ ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများ၊ လျစ်လျူရှုခြင်းခံရသူများနှင့် ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည့် အုပ်စုများသည် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပိုများကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
အကျပ်အတည်းကာလအလွန်တွင် အထူးသဖြင့် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လတ်တလော လိုအပ် ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သည့်ခိုင်မြဲမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်မူဝါဒများကို အစီရင်ခံစာတွင် ကာကွယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အားကောင်းလာခြင်းနှင့် သာယာဝပြောခြင်းစသည့်ရည်ရွယ်ချက်လေးခုဖြင့် ချိတ်ဆက်ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗဈ-၁၉ကုစားရေး ကျောမတီ၏ လလေ့ာဆနျးစဈမှု အစီရငျခံစာက Covid-19 ကာလစီးပှားရေးကုစားမှုအစီအစဉျ အကောငျအထညျ ဖျောဖို့အတှကျ အထောကျအကူပွုပါတယျ” ဟု DaNa Facility မှ Senior Technical Advisor Peter Brimble က ပွောကွားသညျ။ အစီရငျခံစာတှငျ Covid-19 ကွောငျ့ ထိခိုကျမှုရှိခဲ့သညျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို လလေ့ာဆနျးစဈထားပွီး မူဝါဒပိုငျးဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြ မြားလညျး ပါဝငျကာ စီးပှားရေးအကပျြအတညျးကာလအတှငျး MSME လုပျငနျးမြား ဆကျလကျလညျပတျနိုငျရနျ အရေးကွီးကွောငျးကို အလေးပေးဖျောပွထားကွောငျး သိရသညျ။
Covid-19 ကုစားရေးလုပျငနျးကျောမတီ၏ အစီရငျခံစာတှငျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၌ မွနျမာ့စီးပှားရေးဖှံဖွိုးတိုးတကျမှုသညျ သုညသို့ခဉျြးကပျရနျ ခနျ့မှနျးထားကွောငျး ယငျးအစီရငျခံစာတှငျ ပါရှိသညျ။Covid-19 အစီရငျခံစာသညျ DaNa Facility? International Trade Centre နှငျ့ UNCDF တို့ပူးပေါငျး၍ အစိုးရ၏ Covid-19 ကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ စီးပှားရေးသကျရောကျမှုမြားကို ကုစားရေးလုပျငနျး ကျောမတီ ၏လမျးညှနျမှုဖွငျ့ လလေ့ာဆနျးစဈထားသညျ့ အစီရငျခံစာဖွဈသညျ။
ယငျး Covid-19 ကာလ စီးပှားရေးအကပျြအတညျးကွောငျ့ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးမြားနှငျ့ လကွေောငျးလိုငျးမြားသညျ ထိခိုကျ နဈနာဆုံးရှုံးမှုအမြားဆုံးဖွဈပွီး ကုနျသှယျရေးအထူးပွုစကျမှုလုပျငနျးမြား၊ အထညျအလိပျလုပျငနျးမြားနှငျ့ အခွားကုနျထုတျလုပျမှု လုပျငနျး မြားသညျ ဒုတိယထိခိုကျမှုအမြားဆုံး လုပျငနျးမြားဖွဈကာ ဝငျငှနေညျးပွညျသူမြား၊ လဈြလြူရှုခွငျးခံရသူမြားနှငျ့ ထိခိုကျခံစားလှယျသညျ့ အုပျစုမြားသညျ ထိခိုကျပကျြစီးမှုပိုမြားကွောငျး အစီရငျခံစာအရ သိရသညျ။
အကပျြအတညျးကာလအလှနျတှငျ အထူးသဖွငျ့ အသေးစား၊ အငယျစားနှငျ့ အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၏ လတျတလော လိုအပျ ခကျြမြားကို ဖွညျ့ဆညျးနိုငျရနျနှငျ့ ရရှေညျတညျတံ့သညျ့ခိုငျမွဲမှုကို ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ လိုအပျသညျ့မူဝါဒမြားကို အစီရငျခံစာတှငျ ကာကှယျခွငျး၊ ပွနျလညျထူထောငျခွငျး၊ အားကောငျးလာခွငျးနှငျ့ သာယာဝပွောခွငျးစသညျ့ရညျရှယျခကျြလေးခုဖွငျ့ ခြိတျဆကျဖျောပွ ထားကွောငျး သိရသညျ။
(၂၁)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း(၁)သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် အစ အဆုံး တိုက်ရန်
ကိုဗစ်လူနာ များထားရန် မောင်တောမြို့ ၌ အရေးပေါ် ယာယီဆေးရုံ ပြင်ဆင်နေပြီဟု ပြောဆို